Tonizia: Fanehoan-kevitra Manoloana Ny Fitsidihan’i Sarkozy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2017 18:38 GMT
Cos-maux-polis nanoratra lahatsoratra maro momba izany fitsidihana izany, mitsikera ny sasany tamin'ireo fanambaran'i Sarkozy ho mpanavakava-bolonkoditra :
Miharihary fa mampanontany tena tokoa ireo fanambaran'i Nicolas Sarkozy tao amin'ny tany Afrikanina. Nandritra ny fitsidihany ofisialy tao Tonizia, naneho ny heviny momba ny fiarahamiasa Avaratra-Atsimo ny Filohan'ny Repoblika: “Manana mpiasa mangataka ny mba hiofana ianareo, manana faharanitan-tsaina marobe sy fiofanana marobe izahay (…)”.
Namerina ny vaovao nolazain'ny Bakchich ihany koa izy:
Nandritra ny fitsidihana ofisialy tao Tonizia, toa nilaza koa i Nicolas Sarkozy hoe : “Isaky ny mankaty Tonizia aho, misy ny fitokonana tsy hisakafo. Isaky ny mody aho, mijanona ny fitokonana tsy hisakafo. Hitako fotsiny izany, izay ihany”. Toa nilaza koa izy hoe: “Eny tokoa, tsy misy demaokrasia ao Tonizia. Saingy tsy manana fepetra mitovy amin'i Frantsa izy”.
Bilaogera Toniziana zizou from Djerba, namoaka lahatsoratra momba ny faharefon'ny mpanohitra Toniziana, ary nilaza fa tena mila fanovana, no sady nankasitraka ny fahombiazan'i Sarkozy :
Araka ny hitan'ny rehetra, nifidy ny antokony ny filoha Frantsay ary naneho izany mazava. Nisafidy hilalao ny karatry ny governemanta i Sarkozy raha niandry azy toy ny Mesia ny antokon'ny mpanohitra lasa sahisahy taorian'ny tranga tao Redeyef. Nisy ny fitokonana hafa tsy hisakafo nokarakaraina ary natao mialoha ny fifandraisana tamin'ny mpanao gazety izay efa mahafantatra izany… Mendrika ho mazava tsara ny fanambaran'ny filoha Frantsay ary azo takarina tsara ny fanapahan-kevitra noraisiny.
Mpandrindra ny hetsika hisian'ny fahalalaham-pitenena ao amin'ny Global Voices, Sami Ben Gharbia, nanoratra amim-panesoana momba izany fitsidihana izany ary nilaza fa “nifidy an'i Ben Ali i Sarkozy”, nametraka lahatsary misy ireo saribakoly Frantsay malaza tamin'ny fandaharana “Les guignols de l'info” ihany koa izy :
Ny andro faharoa tamin'ny fitsidihany tao Tonizia, nanaja ny fifanekena ara-diplaomasia i Nicolas Sarkozy; izay tian'ny sasany sokajiana fa “Realpolitik”, ary mitondra vaovao mahafaly ho antsika: “mivoatra ny sehatry ny fahalalahana ao tonizia”. Farany! nahazo dera avy amin'ny olona tsy te hiseho ho “mpanome lesona” momba ny zon'Olombelona i Ben Ali.